Tezitra ny fanjakana Nohenjanina ny fifehezana ny vahoaka
Tsapa fa toa ohatry ny andavanandro nahazatra ihany ny zava-misy, ka tsy maintsy raisina ny fepetra, hamafisina ny fanaraha-maso, havoaka ny mpitandro filaminana rehetra.
Na mandeha tongotra na mandeha fiara, dia hosavaina avokoa hoe: iza no manana fahazoan-dàlana manokana, hoy ny Minisitry ny atitany sady Filohan’ny CCO Covid 19 Razafimahefa Tianarivelo omaly . Nisy iny olona iray tsy nandeha fiaramanidina iny efa voa, fa misy ihany koa ny fitiliana efa hatao amin’ireo olona hafa tsy avy any ivelany, fa ireo nifampikasoka taminy. Na nahakasika ny varavarana noraisin’ireo voa aza, dia efa hifindrany. Mijanona any an-trano, harovy ny zaza fa aza avela hivoaka hilalao. Tsy izay nandeha fiaramanidina ihany, tsy izay nifampikasoka taminy, fa ny olon-tsotra rehetra dia mety efa misy mitondra an’io. Mijanona any an-trano fa tsy mety mihitsy ny mivoaka ny trano, hoy ny minisitry ny atitany nanentana. Tany Faratsiho sy Antananarivo nisy tokantrano saika norotahan’ny olona, hoy ny fitantaran’ity minisitra ity; aoka hazava tsara, hoy izy fa tsy voatery hitondra ny valan’aretina ireny olona tsidihana ireny fa fanaraha-maso no atao, ka aoka hitandrina isika fa tsy taitaitra. Matoa misy fiara tonga ao, dia tsy hoe marary ireny olona ireny fa tan-tsoroka no atao aminy. Raha misy olona ahiana, dia mijanona eny an-trano. Adala sy tsy mieritreritra ve isika hoe andao vonoina ilay olona ao, hoy ny fanontaniana napetrany. Aoka koa izay ny fampielezana tsaho hanakorontanana saim-bahoaka hoy ny minisita Tianarivelo Razafmahefa : eny amin’ny hopitaly dia tsy maintsy misy ny teraka, ary misy ny maty, fa izay maty tsy voatery ho matin’ny coronavirus foana. Misy olona marary tsotra na matin’ny loza dia lazaina fa coronavirus. Vaovao ofisialy henoina fa aza manaiky akorontana amin’ny facebook,hoy izy. Manana ny OMS manara-maso izao tontolo izao isika, ka tsy afaka ny handainga. Isika rehefa handraisana fepetra dia mimenomenona. Rehefa tsy afaka ny hifampitaiza tsotra anefa dia tsy maintsy raisina ny andraikitra hoy ny minisitry ny atitany. Efa nahazo baiko hentitra ka tsy hisangisangy amin’ireo mbola tsy manaja ny lamina napetraka ny mpitandro filaminana, hoy izy.Omaly tolakandro ihany moa dia efa nihatra ireo fepetra henjana ireo ka nipoaka ny lakrimozenina nanaparitahana ny olona nitangorona teny Anosizato sy nanerena azy ireo hody.